कोरोना पोजेटिभपछि डा. कार्कीले भने, ‘नो बडी इज सेफ, समयमै परीक्षण गराउनुस्’ – Health Post Nepal
२०७७ साउन ८ गते १८:५०
साउन ८–विराट मेडिकल कलेजका संचालक एवं चर्चित ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले कोरोनाको कहरबाट विश्वमा कोही पनि सुरक्षित नभएको भन्दै समयमा परीक्षण गराउँन सुझाब दिएका छन् ।
६ दिनअघि रुघा, खोकी र हल्का ज्वरो सुरु भएपछि परीक्षण सुरु गरेर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका डा. कार्कीले लकडाउन वा कुनै महामारीका वहाना गरेर कामबाट पछाडि नहटेकै कारण संक्रमण भएको भन्दै यसलाई आफूले सामान्य रुपमै लिएको बताए ।
‘बेमौसमी रुघाखोकी सुरु हुनासाथ मैले सुरुमै आइसोलेसनमा बसिहालेँ र परीक्षण सुरु गरेँ’ डा. कार्कीले भने ।
डा. कार्कीले ‘म ६ दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा थिएँ, पछि पिसिआर पोजेटिभ आयो’
‘म एक दिनपनि घरमा बसिन, जटिल खालका शल्यक्रिया, राउन्ड र मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनको काम जारी राखेँ’ उनले भने ।
उनले अस्पतालमा अन्य कसैलाई संक्रमण नदेखिएको बताए ।उनले अहिलेको अवस्थामा विश्वव्यापी भइसकेको भाइरसबाट कोही पनि सुरक्षित नभएको भन्दै परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आए के होला भन्नेजस्तो त्रास पालेर बस्न नहुने र बेलैमा परीक्षण गर्र्न सुझाब दिए ।
डा. कार्कीको अनुभूतिको अंश
केहीदिनअघि बेमौसमी रुघाखोकी लागेपछि मैले सुरुमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भनेर घरमै बसिहालेँ । पछि पिसिआर पोजेटिभ आयो । ६ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेकोले कसैलाई सर्न पाएँ । म यतिधेरै दिनदेखि एक दिनपनि नरोकिकन काममै छु ।
तर ८/९ वर्षदेखि म ओपिडी बसेको छैन् । राउण्ड लिने, साहेगाहे पर्र्दा शल्यक्रियामा सघाउँने र मेडिकल कलेज व्यवस्थपनमै बढी समय विताउँछु ।
मैले मस्कोको सेन्टपिटर्स कलेजबाट एमडी र पिएचडीसमेत गरे र जर्मनबाट ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा डिप्लोमा गरेँ । नेपालमा सन् २००० देखि ल्याप्रोस्कोपीक सर्जरी सुरु गरेसँगै मैले ४१ हजार हाराहारीमा शल्यक्रिया गरिसकेँ । कामले नै माथि उठेको मान्छे काम नगरी निदाउनै सकिन्न ।
अहिले हामीजस्तो चिकित्सक संक्रमणको डरमा काम नगरी बस्न पनि भएन् । तर का मरेपछि त ‘कोही पनि सेफ छैन् नि, शंका लाग्दा वा नियमित रुपमा पनि टेस्ट गरेर केही बिर्गिदैन । कि पोजेटिभ आउँछ कि नेगेटिभ के बिग्रिन्छ ?
चिकित्सकले पनि मेडिकल इथिक्स फलो गर्नुपर्छ । संक्रमण पोजेटिभ आयो म ६ दिनदेखि आइसोलेसनमा बसेको छु, केही दिनमा भाइरसमुक्त भएर पर्किन्छु । के बग्रिन्छ ? अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्र्ने होइन् । बिरामी वा
त्यहाँ खटिएका जनशक्तिमा देखियो भने, कन्ट्रयांक ट्रेसिङ गर्ने हो प्रोटकलअनुसार नै गर्ने हो नि । भाइरस देखियो भने त्यस्तो घटनालाई लुकाउने प्रयास गर्नुहुन्न ।
अहिले हामी सबै संवेदनशील भएर परीक्षण गराउनुपर्छ र सरकार पनि संवेदनशील बन्नुपर्छ ।